थाहा खबर: प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंलाई काम गर्न कसले रोकेको छ?
नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो केही दिनयता प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ नेकपाभित्र आश्चर्यजनक गतिविधि देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको सरकारबारे पार्टीभित्रैबाट विकल्प खोजिँदै छ।
यसको मुख्य कारक स्वयम् प्रधानमन्त्री हुन् भन्दा केही फरक पर्ने देख्दिनँ। म यहाँ मेरो देशका प्रधानमन्त्रीलाई सामान्यभन्दा सामान्य प्रश्न मात्र सोधिरहेछु। अहिले नेपालको राजनीतिमा भइरहेको यो खेल बुझ्न कुनै राजनीतिशास्त्री वा राजनीतिमा लागेका दिग्गजले अथ्र्याइरहनु पर्छ र? नेपाली जनजनले यो अवस्थााबारे बुझेका छैनन् होला त?
देश कोरोना महामहारीको चपेटामा छ। विश्वभर कोरोना सन्त्रास छाइरहेको छ। विकसित भनाउँदा देशहरूमा सयौं हैन, हजारौं पनि हैन, लाखको संख्यामा मानिसहरूको ज्यान गइसकेको छ। यो बढ्दो छ। यो भयावह अवस्थाको अन्त्य हुने कुनै टुंगो छैन। यसको असर आंशिक रुपमा भए पनि नेपालमा देखिएकै छ। मुलुक पूरै लकडाउनको अवस्थामा छ। खान नपाएर मानिसहरू भोकभाकै सडकमा निस्किरहेका छन्। यो अवस्था देख्नुहुन्‍न प्रधानन्त्रीज्यू?
यो समस्या शासकले बुझिदिए मात्र पुग्नुपर्ने हो। जनताले भारी मत दिएर पठाएका लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सरकारको प्रधानमन्त्री तपाईं किन लाचार बनिरहनुभएको छ? यो गम्भीर विषय होइन र?
म बिहानै उठेर नियमित काम सकेर आफ्नो काममा लाग्छु। नेपाली राजनीति दिनहुँजसो एउटा नौलो घटना मध्यरातमै भइसकेको हुन्छ। लकडाउनको प्रभाव र कोरोनाको त्रासका कारण सिर्जिएका समाचार ह्वारह्वार्ती सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका देख्छु। मानिसका बिलौना, उही चित्कार र पीडा सुनिरहन्छन्। तर सरकार हरेक दिन नयाँ वितण्डा मच्चाइरहेको छ।
सडकमा अलपत्र परेका, भोकभोकै कोठामा थुनिएकालाई सरकारले यस्तो योजना ल्याएर उद्धार गर्दै छ भन्‍ने कतै भेट्दिनँ, देशमा भइरहेको खैलाबैलाको समाधानमा कुनै मन्त्रीले यो खालको निराकरणका उपाय अपनाउँदै छन् भन्‍ने केही सुन्दिनँ।
तर पार्टीभित्रको त्यही खिचातानी, एकअर्काप्रतिको आरोप–प्रत्यारोप, उल्टै बदनामका बाछिटा लिएर सरकार दिनहुँ प्रस्तुत हुन्छ। आफैं खाल्टो खन्छ, अनि आफैं त्यहीँ जाकिन्छ।
अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न मेरो देशको सरकारलाई कसले रोकेको छ? सीमापारि बन्दी झैं बनेर बसेका नेपाली ल्याउन केले छेकेको छ? एकैरातमा कलंकित अध्यादेश ल्याएर बदनाम हुनुको साटो यो अवस्थामा खान नपाएका, घर जान नपाएकालाई एउटा सानो सहानुभूति बोल्न किन सक्नुहुन्‍न? तपाईं कविता लेख्नुहुन्छ, भावना पोख्नुहुन्छ, तर वास्तविकता देख्नुहुन्‍न? अस्तव्यस्तता देख्नुहुन्‍न? कवितामा भावना पोख्नेले जनताको रोदन बुझ्‍न सक्दैन?
किन आफैं विवादको सिर्जना गरेर बदनामको बाटोमा लाग्नुहुन्छ? यस्तो सत्तामोहले आफैंलाई हानि गरेको बुझ्नुहुन्‍न? प्रधानमन्त्रीज्यू उट्पट्याङ बोली र काम छोडिदिनुस् न, भोलि यिनै देशका जनताले तपाईंको जयजयकार गर्न थाल्नेछन्।
नेपाली खान नपाएर छटपटाइरहेका छन्। यस्तो बेलामा राजनीतिक मुद्दामा अल्झिएर खास समस्यामा मात्र केन्द्रित हुनुस् त कसले नराम्रो भन्‍न सक्छ तपाईंलाई? वैरीको मुख छुच्चो हुन्छ। तर आफैं पनि किन छुच्चो बन्नुहुन्छ?
किन विवादको घेरामा बारम्बार तानिरहनुहुन्छ? देश विकासका त्यत्रा योजना सुनाउन सक्ने, अनि कसरी काम गर्दा देशले निकास पाउँछ भनी बुझ्न पनि सक्ने तर खोइ त काम?
भलै कोरोना त्रास विदेशमा जस्तो नेपालमा छैन। ठूलै संकट आइसकेको छैन, तर नआउला भनेर ढुक्न पर्न सकिँदैन। त्यो संकट निम्तिए के गर्ने भन्‍ने योजना खोइ तपाईंसँग?
तपाईंले चलाएको सरकारको आयु साढे दुई वर्ष पुग्न लाग्दैछ। के के भए देखिने खालका काम भनेर म सोध्दिनँ, कति भ्रष्टाचार भए, कतिलाई कारबाही भए कति त्यसै छाडिए भन्‍ने पनि अहँ मलाई चासो छैन। तर कम्तीमा अवस्थाअनुसार त तपाईं चलिदिनुस्।
तपाईंका फुस्रा भाषण र वाहियात तर्क पनि हामी बिर्सिदिउँला। तपाईं र तपाईंका सरकारले हिजो गरेका गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक काम पनि हामी हेराैंला। तर एउटा यस्तो काम गरिदिनुस् जुन जसले सारा नेपालीले तपाईभित्रको पहिलो कार्यकाल सम्झिऊन्।
तर सक्नुहुन्‍न। किनकि शासकीय दम्भले तपाईंभित्र अराजकता भरिइसकेको छ। स्वार्थले तपाईंलाई ढाक्दै छ। आफ्ना मान्छे लगाएर सांसद उठाएर काठमाडौं ल्याई आफैं विवादमा पर्ने यो जुक्ति कसले दियो तपाईंलाई? यस्तो बुद्धि यता लाउनुको साटो एक महिना बढी समयदेखि भाकै बसेका, नेपाल भित्रिन नसकेर सीमामा रोएर बसेका नेपालीलाई ल्याएर उचित व्यवस्थापन गरेको भए भए कत्रो इज्जत बढ्ने थियो तपाईंको। यति पनि हामीले नै भनिदिनुपर्ने?
अहिले सारा नेपालीसँग प्रश्न मात्र छन् तपाईंसँग। उनीहरूलाई उत्तर कसरी दिनुहुन्छ? कम्तीमा पाएको बहुमतको त कदर गर्नुस्, त्यसमा तपाईंलाई कसले रोक्न सक्छ? पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहको बीउ तपाई आफैं होइन? प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईं सरकार अहिले कसैले ढाल्दैन, विवादित अलोतान्त्रिक काम नगरिदिनुस् प्लिज। अहिलेको यत्ति अवस्थालाई बुझ्ने प्रयत्न मात्र गरिदिनुस्।